Obama oo dhaleeceeyey hogaanka Mareykanka
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa xalay jeediyey laba khudbo oo uu u jeediyay ardayda dugsiyada sare sanadkan dhameysatay iyo kuwa jaamacadaha.
Munaasabadahan ayaa loo qabtay qaabka digitalka ah ee livestream sababo la xiriira xayiraadaha loo soo rogay xakameynta coronavirus, taasi oo bedeshay habkii loo qaban jiray munaasabadaha qalinjebinta ardayda.
Obama wuxuu dhaleeceeyey hoggaanka Mareykanka, taasi oo ahayd arrin uu madaxwaynihii hore ka dhowrsan jiray.
Obama ayaa ka hadlay cudurka safmareenka ah ee COVID-19, isaga oo dhaliilay sida hoggaamiyeyaasha Mareykanku ay wax uga qabteen cudurkan. Madaxweynihii hore ayaan xusin magaca Madaxweyne Donald Trump.
Waxa uu u sheegay ardayda qalin jebineysa “cudurkan safmarka ah waxa daaha ka rogay dhibaatooyin badan oo qoto dheer oo uu ka jira dalkeenna — laga bilaabo sinnaan la’aanta dhaqaale ee baahsan, ilaa sii socoshada nacaybka ku saleysan kala duwanaashaha isirka ilaa la'aanta daryeel caafimaad oo aasaasi ah oo loogu talagalay dadka u baahan.”
Isaga oo la hadlayay ardayda ka qalinjebineysa jaamacadaha taariikhiga ah ee dadka madow, ayuu Obama yiri “cudur kan oo kale ah [COVID-19] kaliya wuxuu muujinayaa sinnaan la'aanta iyo culeyska dheeraadka ah ee bulshooyinka madow ay taariikhiyan ku wajahayeen dalkan.”
Madaxweynihii hore ayaa yiri, “waxaan u aragnaa saameynta aan kala sooca laheyn ee COVID-19 uu ku yeeshay bulshooyinkeenna, sida aan u aragno markii nin madow ah oo aaday rucle, ay dadka qaar dareemeen iney joojin karaan, su’aalana weydiin karaan, ayna dili karaan haddii uusan ka jawaabin su’aalahooda,” waxaana uu hadalkan kala jeeday dilkii Ahmaud Arbery, oo ahaa wiil 25 jir madow ah oo lagu toogtay gobolka Georgia